10. ဗီယင်နာမြို့က သေမင်းနတ်သမီးလို့ခေါ်တဲ့ Waltraud Wagner
သူမနဲ့ အဖော်သုံးဦးတို့ဟာ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှ ၁၉၈၉ခုနှစ်အထိ၊ ခြောက်နှစ်ကျော်အတွင်း လူသတ်မှုပေါင်း ၄၉ မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပေမယ့် လူဦးရေ ၂၀၀ လောက်ဟာ သူမတို့လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ သူမဟာ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့ လိန့်ဇ်ဆေးရုံမှာ သူနာပြုလက်ထောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ သူမအသက် ၂၃နှစ်
အရွယ်မှာ လူနာတဦးကို မော်ဖိန်းအလွန်အကျွံပေးပြီး ပထမဆုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ ဘဝတူသူနာပြုတွေဖြစ်တဲ့ Gruber (၁၉နှစ်)၊ Leidolf (၂၁နှစ်) နဲ့ ၄၃နှစ်အရွယ် Stephanija တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်လူသတ်နည်းတွေကို တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာတွေကို နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီး ပါးစပ်ထဲရေလောင်းထည့်ကာ အဆုတ်ကို ရေမွန်းစေအောင်ပြုလုပ်ပြီးသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာတွေဟာ အဆုတ်မှာ အရည်ကိန်းအောင်းမှုများတာကြောင့် သူတို့အဲဒီလိုတွေလုပ်နေကြတာကို အချိန်တော်တော်ကြာမရိပ်မိခဲ့ကြပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာတော့ သံသယဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သေဆုံးမှုတခုကို စုံစမ်းရင်းနဲ့မှ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဦးဆောင်သူ Wagnerက ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်း၊ Leidolf က လူသတ်မှုငါးမှုအတွက် ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်း၊ Mayer နှင့် Gruber တို့က နှစ် ၂၀နဲ့ ၁၅နှစ်စီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
9. ဗြိတိန်နိုင်ငံက အာဆင်းနစ် အမျိုးသမီး Mary Ann Cotton
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ မေရီအန်းဟာ သူနာပြုဆရာမတဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ နှစ် ၂၀ အတွင်း ယောက်ျား ၄ဦး ကိုလက်ထပ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ယောက်ျား ၃ဦး၊ သူမရဲ့ကလေးများ၊ ယောက်ကျားကပါလာတဲ့ သားသမီးများ၊ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူများအပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၂၁ဦးကို အာဆင်းနစ်အဆိပ်သုံးပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သတ်ဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အသက်အာမခံကြေးတွေကို ရယူချင်တဲ့အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမကို ၁၈၇၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ရက်နေ့မှာ Durham အကျဉ်းထောင်တွင် ကြိုးမိန့်ချ သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
8. အမေရိကန် ကွင်းဆက်လူသတ်သမ Genene Jones
တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဆန်အန်တိုနီယိုဆေးရုံက သူနာပြုဆရာမ Genene Jones ကို Chelsea McClellan အမည်ရှိတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် ၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ succinylcholine drugs
ကိုအသုံးပြုပြီး ကလေးငယ်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ထပ်မံစစ်ဆေးချက်များအရ သူမဟာ ၁၉၇၀ နဲ့ ၁၉၈၀ ကြားမှာ ကလေးငယ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပြီး သူမကို အမေရိကန်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် အသက် ၈၇နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် သူမဟာ ပြစ်မှုကြွေးကို ဆပ်နေရတုန်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
7. ပြင်သစ်ထမင်းချက် Helene Jegado
သူမသည် ၁၈ နှစ်ကာလအတွင်း ကလေးငယ်များအပါအဝင် လူပေါင်း ၈၀လောက်ကို အာဆင်းနစ်အဆိပ်သုံးပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၃၃ ကနေ ၁၈၄၁ ခုနှစ်အကြားတွင် လူသတ်မှုတွေကို အများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် သူမချက်ပြုတ်တဲ့ ဟင်းလျာတွေထဲမှာ အာဆင်းနစ်အဆိပ်ကို ထည့်သွင်းပြီး သူမသားကောင်တွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမသတ်ဖြတ်ခဲ့သူတွေထဲမှာ သူမရဲ့ အမ အန်နာနဲ့ အဒေါ်တဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သူမကို ၁၈၅၁ခုနှစ်မှာရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
6. စိတ္တဇလူသတ်သမ Jane Toppan
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော်စတွန်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ Nora Kelley (1854-1938)ကို Jane Toppan လို့လူသိများကြပါတယ်။ သူမဟာ သူနာပြုတယောက်ဖြစ်ပြီး သူမတာဝန်ယူထားတဲ့ လူနာများစွာသေဆုံးခဲ့အပြီးမှာတော့ သူမအပေါ်သံသယဝင်လာပြီး အလောင်းများကို ပြန်လည်တူးဖော်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှ လူသတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူမသည် လူသတ်မှု ၃၁ မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ်တွင် Taunton စိတ္တဇဆေးရုံမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။